Baidu သည် ရှယ်ယာ များ ရောင်းချ ရန်ရည်ရွယ် ထားကြောင်း Aiqiyi ငြင်းဆို ခဲ့သည် - Pandaily
Baidu သည် ရှယ်ယာ များ ရောင်းချ ရန်ရည်ရွယ် ထားကြောင်း Aiqiyi ငြင်းဆို ခဲ့သည်
Jun 15, 2022, 19:50ညနေ 2022/06/15 23:14:31 Pandaily
ရိုက္တာBaidu သည်ဟောင်ကောင် ပုဂ္ဂလိက ရှယ်ယာ ကုမ္ပဏီ PAG နှင့် China Mobile အပါအ ၀ င် ၀ ယ် သူများ၏ စိတ်ဝင်စားမှု ကိုဆွဲဆောင် နိုင်သည့် Aiqiyi တွင် ၅၃ ရာခိုင်နှုန်း ရှယ်ယာ ရောင်း ရန် အလားအလာရှိသော ဝယ်ယူ သူများနှင့် ညှိနှိုင်း နေသည်ဟု အင်္ဂါနေ့က အစီရင်ခံခဲ့သည်။ Aiqiyi ၏ရှယ်ယာ များ သည်အမေရိကန် စျေးကွက် မတိုင်မီ ၃% ကျဆင်းခဲ့သည်။ဒီသတင္း ဟာ မမွန္ ကန္ ေၾကာင္း ေအးခ်မ္း ေအးက တုံ႔ျပန္.
၂၀၂၀ ခုနှစ်မှစ၍ Aiqiyi ကို Baidu မှ ရောင်းချ မည်ဟု ကောလာဟလ များ ထွက်ပေါ် ခဲ့ပြီး Alibaba , Tencent နှင့် Bytedance တို့ပါဝင်သည်။ Baidu သည် ၂၀၂၀ နို ၀ င်ဘာလတွင် ရောင်းချ မှု နှင့်ပတ်သက်သော ကောလာဟလ များကို တရားဝင် တုန့်ပြန် ခဲ့သည်။ Aiqiyi သည် Baidu ၏အ ကြောင်း အရာ ဂေဟ ဗေဒ ၏အရေးပါသော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်ကြောင်း ကုမ္ပဏီက ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ Baidu သည် Aiqiyi ပလက်ဖောင်း နှင့်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို အမြဲတမ်း ထောက်ပံ့ လိမ့်မည်။
Baidu သည် Aiqiyi ၏ ၅၃% ကိုပိုင်ဆိုင် ပြီး ရှယ်ယာရှင် များ၏ မဲပေး ပိုင်ခွင့် ၏ ၉၀% ကျော်ကို ပိုင်ဆိုင်သည်။ Aiqiyi သည် ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်စတင် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး တရုတ်နိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း ဗီဒီယို ပလက်ဖောင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် ၁၀ နှစ်ကျော် အရှုံးပေါ် ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ကုမ္ပဏီ သည်ယခုနှစ် Q1 တွင် အသားတင် အမြတ် ငွေ ယွမ်သန်း ၁၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၄. ၉ သန်း) ကျော် ရရှိခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ကုမ္ပဏီ၏ စာရင်း နောက်ပိုင်း အမြတ် ၏ပထမ သုံးလပတ် ဖြစ်သည်။
၂၀ ၂၂ ခုနှစ်မတ်လ ၃၁ ရက်အထိ Aiqiyi ၏ အတည်မပြု ရ သေးသော Q1 ဘဏ္ report ာရေး အစီရင်ခံစာအရ Aiqiyi သည် ၀ င်ငွေ ၇. ၃ ဘီလီယံ ခန့် ရရှိခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီ၏ အသားတင် အမြတ် မှာ ၁၆၉ သန်း ဖြစ်သည်။ အကြီးမားဆုံး ၀ င်ငွေ ရင်းမြစ် မှာ အသင်း ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှု များဖြစ်ပြီး ၀ င်ငွေ ယွမ် ၄. ၅ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၄% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ပျမ်းမျှ နေ့စဉ် ပေးဆောင် သူ ၁၀၁ သန်း ရှိပြီး ယခင် သုံးလပတ် ထက် ၄. ၄ သန်း တိုးလာခဲ့သည်။ အသင်း ၀ င် ၀ န်ဆောင်မှု ၀ င်ငွေ တိုးလာ ခြင်းသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ကုန်ကျစရိတ် များ မြင့်တက် ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ အသင်း ၀ င်တစ် ဦး ချင်းစီ ၏ပျမ်းမျှ ၀ င်ငွေသည် ပြီးခဲ့သည့်နှစ် အလားတူ ကာလက ၁၃. ၆၄ ယွမ် နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၁၄. ၆၉ ယွမ် ရှိသည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:ပုဂ္ဂလိက ရှယ်ယာ ရန်ပုံငွ ေဒေါ်လာ ၂၈၅ သန်း ရှိကြောင်း Aiqiyi ကြေငြာ ခဲ့သည်
Gong Yu, Aiqiyi ၏ တည်ထောင်သူ နှင့် စီအီးအို မကြာသေးမီက ဘဏ္ဍာရေး အစီရင်ခံစာ အစည်းအဝေး အတွက် ကုမ္ပဏီ ရဲ့ စီးပွားရေး တိုးတက်မှု အကြောင်း ပြောဆို: “2022 ၏ပထမ သုံးလပတ် ကျနော်တို့ အဖွဲ့ဝင် စီးပွားရေး တိုးတက်မှု မြှင့်တင် ရန် ပရီမီယံ အကြောင်းအရာ တစ်ခု စီးရီး စတင် ခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် စစ်ဆင်ရေး ထိရောက်မှု တိုးတက်စေရန် ထိရောက်သော အစီအမံ အမျိုးမျိုး ယူ ခြင်းအားဖြင့်, Aiqiyi အမြတ်အစွန်း တိုးတက်မှုနှုန်း အောင်မြင် နှင့် အမြတ် အမြတ်အစွန်း တိုးမြှင့် ။”
High Gua Video က Besso Video ကို မတရား ယှဉ်ပြိုင် မှုအတွက် ဒေါ်လာ ၁၈၈, ၃ ၀၆ ဖြင့် တရားစွဲ
မကြာသေးမီက ဟူ နန် ပြည်နယ် အဆင့်မြင့် ပြည်သူ့ တရားရုံးက အမှု တစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ စီရင်ချက်ချ ခဲ့သည်Baiduဗီဒီယို (ယခု Baisuo Video ဟုအမည် ပြောင်း) သည် ဖရဲသီး ဗီဒီယို ဆာဗာ တွင်သိမ်းဆည်း ထားသော ဗီဒီယို ကိုပြန်လည် တင် သည်။